मंसिर महिनामै काठमाडौंमा हिउँ पर्यो ! – All top Here
Home/समाचार/मंसिर महिनामै काठमाडौंमा हिउँ पर्यो !
7,772 1 minute read
काठमाडौं । काठमाडौंको चन्द्रागिरिमा हिउँ परेको छ ।बुधबार साँझदेखि मुलुकभर आएको मौसम ब’दलीका कारण चन्द्रागिरिमा हिउँ परेको हो ।बुधबार साँझदेखि नेपाल प्र’वेश गरेको पश्चिमी वायुको प्र’भावले मुलुकभर चिसो बढेको छ।बिही बार बिहान काठमाडौं उपत्यकासहितका स्थानमा वर्षा पनि भएको छ । वर्षा भएसँगै चन्द्रागिरिमा हिउँ परेको हो । चन्द्रागिरिमा हिउँ परेको चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडका महाप्रबन्धक अभिषेक विक्रम शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिएका छन् । वर्षा र हि’मपातका कारण काठमाडौं उपत्यकामा चिसो ब’ढेको छ ।
मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले काठमाडौंमा शुक्रबार साँझ पानी पर्न सक्ने जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार शनिबारदेखि भने मौसममा सु’धार हुँदै जानेछ। त्यस्तै कालिकोटमा मंसिर महिनामै भारी वर्षासँगै हि’मपात भएको छ । झण्डै एक दशकदेखि मंसिर महिनामा हि’मपात भएको थिएन । खडेरीका कारण जिल्लाको कृषि उत्पादनमा बर्षेनी ह्रा’स हुँदै आएको थियो। शुक्रबार भएको भारी वर्षासँगै हि’मपातले जाडो निकै ब’ढेपछि जिल्लाको ज’नजीवन क’ष्टकर बनेको छ। बिहीबार रातीदेखि लगातार वर्षा भएसँगै भा’री हि’मपात भइरहेको छ।
गत वर्ष कालिकोटमा माघ महिनामा मात्र हिउँ परेको थियो । जिल्लामा पानी नपर्दा किसानको पाखाबारी बाँ’झै रहेको थियो । अब पानी रो’किएपछि पाखो बारीमा किसान गहुँ छ’र्ने भएका छन्। बर्षेनी पर्दै आएको खडेरीका कारण नि’रास बनेका किसान यसबर्ष समयमै वर्षासँगै हिउँ परेपछि निकै खु’सी भएका छन् ।समयमै परेको वर्षाका कारण हिउँदे बाली स’प्रिने भएपछि किसानलाई रा’हात भएको छ । हि’मपातपछि कालिकोट सदरमुकाम मान्मदेखि देखिने उ’च्च हिमालय र चुचुरा सेताम्मे भएका छन् । भारी वर्षा र हिमपातका कारण कालिकोटमा अ’त्यधिक जा’डो ब’ढेको छ।
बिहीबार रातीदेखि परेको पानी र हिमपातले जाडो निकै वृ’द्धि भएकाले नागरिकलाई स’जकता अ’पनाउन प्र’शासनले आ’ग्रह गरेको छ । कालिकोटका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी मबबहादुर नेपालीले जिल्लाभर भा’री वर्षासँगै हि’मपात भइरहेकाले स्था’नीय लाई जाडोबाट जो’गिन आ’ग्रह गरिएको बताए । यसैगरी जिल्ला स्वास्थ्य का’र्यालय कालिकोटले झरीसँगै ब’ढ्दो चि’सोका कारण बालबालिका र वृद्धवृद्धालाई रु’घाखोकी नि’मोनिया द’मजस्ता रो’गबाट बच्न न्या’नो कपडासहित तातोमा रहन आ’ग्रह समेत गरेको छ ।
५० रुपैयाँका दुई थान नोट घुस दिने चालक प्रहरीको फन्दामा
प्रेमीसँग मि’लेर आमाको ह’त्या गर्ने छोरीसहित ४ जनालाई ज’न्मकै’दको फै’सला